မောင်ကျောက်ခဲ(မြန်မာပြည်): KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး ကန်ကြီးထောင့်က ရဲကိုဝင်ဖမ်းသွားလို့.
▼ Feb 24 - Mar3(14)
ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း တိုင်းတစ်ပါး လူဦးရေ ထိန်းချ...
မြန်မာတပ်မတော်ထံ အလင်းဝင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော KIA တပ...
နော်ဝေတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အား ဆန္ဒပြသော မြန်မာနိုင်...
ပီတိ အခမဲ့ဆေးခန်းမှ မျက်ရည်ဝဲစရာကောင်းလောက်အောင် ပ...
တာဝန်ရှိသူများနှင့်ကာယကံရှင်များ ဖြေရှင်းရန် ကျန်း...
ထူးဆန်းသည့် ကုက္ကိုပင်ကြီးကို ခုတ်လှဲရန် အဆင်မပြေဖြ...
သာသနာကို ကြည်ညိုလွန်းလို့ မြန်မာဦးဇင်း ဖြစ်လိုသူ
Home » ပန်ကြားပါရစေ » KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး ကန်ကြီးထောင့်က ရဲကိုဝင်ဖမ်းသွားလို့.
KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး ကန်ကြီးထောင့်က ရဲကိုဝင်ဖမ်းသွားလို့.
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် အစိုးရနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ စောဝင်းမြင့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးသည် မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်ဆန်ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လက်နက်ခဲယမ်းများအားယူဆောင်လာပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအား ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
သွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ်ထိန်မောင်)အဖွဲ့မှ စောဝင်းမြင့် ဦးစီး ၂၀ ဦးခန့်သည် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ တရားမဝင် လက်နက် ခဲယမ်းများနှင့် လက်ပစ်ဗုံးများ သယ်ဆောင်လာပြီး ဝင်ရောက်လာကြောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများမှ တာဝန်ရှိသူ များအား သတင်းပို့ခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိ သူများမှ ၎င်းတို့အားသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး လက်နက်များယူလာ၍ မရကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး ပါလာသော လက်နက်ခဲယမ်းများကို အပ်နှံစေခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့အဆင်ပြေ စေရန်အတွက် ပုသိမ်မြို့မှတာဝန် ရှိသူများနှင့်
၎င်းအဖွဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ယာဉ်လေးစီးဖြင့် ပုသိမ်ရန်ကုန်ကားလမ်းအတိုင်းထွက်ခွာခဲ့ပြီး ကန်ကြီးထောင့်မြို့ လမ်းဆုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁) ဦးနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁) ဦးတို့အား အတင်းအဓမ္မ ကားပေါ်သို့ဆွဲတင်ကာဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ၎င်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား အသက်ရှင်လျက် ပြန်လိုချင်ပါက ၎င်းတို့ထံမှသိမ်းဆည်းထားသော လက်နက်များအားပြန်ပေးရန် ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အင်အား ၁၈ ဦးနှင့် ကား ၃ စီးအား အင်းတိုင်မြို့တွင် တာဝန်ရှိသူများမှ တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖမ်းခေါ်သွားသောနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား ပြန်လည် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
“ အခြေအနေကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အမည်ခံပြီးမြို့ပေါ်မှာလာပြီး သောင်းကျန်း
နေတယ်။ တစ်ကယ့်မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန်ပါပဲ။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦး ဓါးစာခံအဖြစ်ဖမ်းလာတယ်။ ပြီးတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကားတွေတားတော့သူတို့ကိုမလွှတ်ပေးရင် ဘေးနားမှာရပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ဆီတင်ကားကို မီးရှို့မယ်လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ဒါပေမယ့်တာဝန်ရှိသူတွေ ရောက်လာပြီး အခြေ အနေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ် ” ၎င်းယာဉ်တန်းအား တားဆီးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း သင့်ပါတယ်။ အခုဟာက အထက်ကခေါင်းဆောင်ကမသိဘူး အောက်ကတပ်သားတွေက ကိုယ့် သဘောကိုယ်ဆောင်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတယ်ဟု ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ တပ်မှူးတစ်ဦးကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့မှ ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံအား မေးမြန်းခဲ့ရာ ဥပဒေချိုးဖောက်ခဲ့သော စောဝင်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့အားပြန်ရောက်လာပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုဖြစ်စဉ်တွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ စောဝင်းမြင့်ဆိုသူသည် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုဖြင့် ခွင့်မဲ့ ပျက်ကွက် ဖြစ်ပွား
ခဲ့သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထောင်ချထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထောင်မှ
ထွက်ပြီးနောက် KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ(ဗိုလ် ထိန်မောင်)
အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံမှပြောကြားခဲ့သည်။
KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်)အဖွဲ့သည်KNU အဖွဲ့ထံမှ(၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင် ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ယခင် အစိုးရဟောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ရေးထိုးသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ယခု အစိုးရသစ် လက်ထက် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပြည်နယ်အဆင့်( ၁ ) ကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေး လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
၎င်းအဖွဲ့သည် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၅၀၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး ကရင်ပြည်နယ် ထို့ကော်ကိုး၊ မဲလဒေသတွင် အခြေချကာ ထိုင်းနိုင်ငံမှမှောင်ခိုပစ္စည်းများအား အကောက် ကောက်ခံခြင်း၊ လိုင်စင်မဲ့ကားများအား တင်သွင်းခြင်း၊ သစ်ခိုးထုတ်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:10 PM
0 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်:
အမျိုးသမီး ရင်သားကို နေ့စဉ် ကြည့်ရှု ခံစားသည့် အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နိုင်
လှပ ကျော့ရှင်းသည့် အမျိုးသမီး တဦး၏ ရင်သားအလှကို နေ့စဉ် (၁၀)မိနစ်စီ ကြည့်ရှု ခံစားခြင်းသည် အမျိုးသားများ အတွက် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေကြော...
ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ဘဝဟာ အတော်လေးကို ရုန်းကန်ရပါတယ် … ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရလာတဲ့ ချွေးနှဲ စာလေးတွေကို မိသားစုကို ပြန်ထောက်ပံ့သူက တစ်မျ...
မြန်မာမှာ နူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖို ရှိသင့်တယ်
ကျွန်ုပ်မောင်ကျောက်ခဲကတော့ အချိန်လည်းမအားလို့ သိပ်အရှည်ကြီးမပြောချင်ဘူး ။နောက်ပြီး ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက စာလေးများ ရှည်လာရင် ကိန်း...
ကုလားတိုက်ခိုက်ခံရသူ ကျောင်းဆရာမလေး သတိပြန်လည်လာ ပြီ
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပီချောင်းဝရှိ မြင်းဂန်းကျေးရွာမှ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို ရွာကမ်းစပ်တွင် ပိုက်လာချသူ ကုလားနှစ်ယောက်က ရိုက်နှုက်တိုက်ခ...